Sahel: Manamafy ny Vahohony Any Amin’ny Faritra Ny Boko Haram Sy Ny AQMI · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Febroary 2012 1:39 GMT
Vakio amin'ny teny English, বাংলা, Español, Français
Am-bolana maro izao ireo silamo “intégristes” ara-pivavahana (mpifikitra amin'ny fomba nahazatra hatrizay) no nanamafy ny adin'izy ireo amin'ny mponina sy ny repoblika federaly ao Nizeria sady manandrana manitatra ny faritra iasan'izy ireo mankany amin'ireo firenena hafa any Sahel. Miteraka fandalinana ireny fanafihana ireny, sy fijerena akaiky ary fanehoan-kevitra eny anivon'ny tontolon'ny bilaogy hatrany amin'ireo firenena mpifanolo-bodirindrina.
Ireo mpiara-dia amin'ny Boko Haram voasambotry ny polisy, sary avy amin'i @tianmine ao Biafra
Philippe Hugon, anaty lahatsoratra iray ao amin'ny tranonkala Grotius, dia manome ny fandinihany an'ity toe-draharaha saropady ity izay loza mitatao, voalohany indrindra, ho an'ny maha-tokana an'i Nizeria:
Ao an-drenivohitry ny firenena, ao Jos, ny fifandirana dia eo amin'ny silamo Fulani sy ny kristianina Berom, vahoaka roa izay manana sata sy zo samihafa. Raha toa kosa indray ny fironana islamika any Avaratra, marobe izy ireo (“soufisme” misy ny firahalahiana nentim-paharazana, hetsika salafiste, maadhistes sy chiites) mifanandrina aminà fari-panjakana 12 (amin'ireo 36) izay nametraka ny lalàna “charia”.
Ho an'ity mpanoratra ity, lavitra ny hoe hihamalefaka, ny hetsika dia mihamafy ary mampiseho endri-javatra faran'izay mampiasa saina :
Ny resaka mavesa-danja, ny antony dia noho ireo fisavoritahana tany Libia, dia ny fianahan'ny vondrona AQMI. Ilay hetsika mankahala tandrefana Boko Haram, nipoitra ny 11 septembre 2001, hita tany amin'ny fari-panjakan'i Borno dia mampiroborobo ny “djihadisme” ; nisaratsaraka ho sampana maro izy ka ny iray dia akaiky kokoa ny Chebabs any Somalia sy ny Aqmi. Nefa noho ny fombany mamàka lalina sy mahery setra, dia manome vahana ny fitsitokotokoana ara-pivavahana mitondra aminà herisetra, valifaty sy famoretana izy.
Ny 26 janoary 2012, ny ONU dia namoaka tatotra iray nataonà tarika iray izay nandeha tany aminà firenena maro tany Sahel mba hanadihady ny fiantraikan'ny ady an-trano eo an-toerana tany Libia. Araka io tatitra io, ireo vondrona mitam-piadiana toy ny sekta Boko Haram ao Nizeria na koa ny AQMI (Al Qaïda any Maghreb Islamika) dia manana fahafahana miditra aminà toeram-pitahirizana fitaovam-piadiana mamoa-doza.
Antoine Barbizon dia nanoratra lahatsoratra iray mikasika izay ao amin'ny bilaogy geotribune.com , lahatsoratra iray izay mivaky toy izao :
Ireo governemanta sy ireo tompon'andraikitr'ireo Fanjakana izay nivantanan'ny tarika mpanao tombana avy amin'ny ONU dia nampita izay vaovao teo ampela-tanany izay milaza fa fitaovam-piadiana sesehena avy any Libia no tonga amin'ny fomba tsy ara-dalàna any amin'ny firenena maro any Sahel. Izany dia an-tsokosoko no itondran'ireo mpiady tranainy avy ao Libia azy, na ireo miaramila sy mpikarama an'ady niasa ho an'i Kolonely Mouammar Kadhafi, io antontam-pitaovana io dia ahitàna fandefasana grenady, basy marovava misy fitliana fiaramanidina, basilava mamahan-tena, bala, grenady, baomba sy fitaovana maivamaivana fametaka amin'ny fiara. Any an-tany efitra no mety ho nanafenana ireo fitaovana ireo, ary ny ampahany dia namidy amin'ireo tarika mpampihorohoro. Ny tatitr'ity andiany avy amin'ny ONU ity dia manasongadina ihany koa ny eritreritra fifanantonana mampahatatotra eo amin'ny Boko Haram sy ny AQMI, ireo vondrona roa izay nanapa-kevitra ny hanitatra rahateo ny faritra iasany ho any ivelan'izay efa misy azy ankehitriny.
Tsy manafina ny tahony ireo mponina any amin'ireo firenena manodidina mikasika ity toe-draharaha ity, sy ny risika mety hisian'ny fihoaram-pefy. Araka izany ao Kamerona, marobe ireo mpiondana aterineto no mampahafantatra fivoaran-javatra mamoa-fady.
Elizabeth Kendal dia nanoratra tao amin'ny bilaoginy hoe :
Garga Aoudou, mafàna fo iray miasa amin'ny sehatry ny maha-olona miaraka aminà fikambanana “néerlandaise” misahana fampandrosoana dia nanambara tamin'ny IPS fa ny tanànan'i Garoua dia “rakotra tanteraka tamin'ireo trakta mihantsy ny silamo hankahala ireo kristiana”. Manohy i Aoudou, “ireo fatram-pandàla ny finoana silamo dia manentana ny hampitomboana isa ny fampakarambadin'ireo tovolahy silamo maka tovovavy kristianina mba hamadihana azy ireny ho silamo, manentana mba handa tsy hampanofa trano, na hivarotra tany amin'ny kristiana – na hanery azy ireny hifindra amin'ny alàlan'ny fampakarana ny hofan-trano “.
Ao amin'ny bilaogy sanfinna.com, i Jean Baptiste naudet dia nanoratra hoe :
Io no isan'ny nofy ratsy indrindra ho an'ny sampam-pitsikilovana. Ary dia manomboka miseho masoandro izy izao. Ao Nizeria, ny sekta islamista Boko Haram ( izay midika hoe « ota ny fanabeazana tandrefana » amin'ny teny haoussa) dia tsy hoe fotsiny an-dalam-pahazoana hery sy miha-mahazo faka, fa indrindra indrindra lasa foibe matanjaky ny fanaovana asa fampihorohoroana miainga avy ao Maoritania hatrany Somalia.
….Nandritra ireo fanafihana matetika nataon'ilay sekta tamin'ireo kaomisaria, tempoly sy fonja tany avaratra, dia miisa an-jatony hatrany ny aina nafoy. Ankoatry ny fitomboan'ny herisetra, ny fivoaran'ny tarika mpampihorohoron'ny Al-Qaida ivelan'ny Sahel dia mampanahy satria mifandraika indrindra amin'ny fiverenan'ireo mpiady avy any atsimon'i Sahara (mpomba an'i Kadhaf) avy any Libia, sy ny fahatongavan'ireo fitaovam-piadiana mahery vaika avy amin'ireo tahirim-pitaovana norobaina tany amin'io firenena io.
Ny tranonkala Maoritaniana noorinfo.com manoratra hoe :
I Maoritania, Alzeria, Niger sy Mali dia misedra ny fiakaran'ny tsy fandriampahalenana mifamatotra amin'ny hetsik'ireo mafàna fo avy amin'ny AQMI sy ireo vondrona mpanao heloka bevava hafa, sy ny fitobahan'ny fitaovam-piadiana, isan'izay ireo fitaovam-piadiana mavesatra avy amin'ny fifandonana Libiana.
Mahatsapa ireo vahoaka silamo fa na ry zareo koa aza dia lasa takalon'aina, ary ny herisetra atao an'ireo kristianina dia mahatafiditra azy ireo ka dia tsy maintsy mirotsaka an-tsehatra amin'ny fisorohana ry zareo. Araka izany, tanaty tafatafa nifanaovany tamin'ny tranonkala camer.be Ernest Djonga, Filoham-paritry ny Tanora Silamo any Avaratra dia nanazava ireo fepetra noraisin'ny hetsika tantanany sy ny tompon'andraikitra ara-pinoana silamo mba hiatrehana ny fanamby entin'ny fisian'ny sekta Boko-Haram any avaratr'i Kamerona :
Noho ny fahitàna ny loza ho avy, izahay dia nangataka ny hirotsahan'ny Lamido [manampahefana ambony indrindra ara-pomban-drazana] an-tsehatra, izay tamin'ny fotoanan'itompokolahy Ibrahim Abbo, dia nandray fepetra henjana tamin'ny famerana ny asan'ireo mpitarika ara-pivavahana sy teo amin'ny sehatry ny Tanora Silamo tao Kamerona, nipetraka hanara-maso ireo lohahevitra samihafa mila velabelarina any amin'ireo MAoske 19 izahay … [ao] an-tananan'i Garoua. Ity fomba ity dia teo ambany fiahian'ny mpanjaka Alim Garga Hayatou. Nisy fiarovana araka ny lalàna napetraka ka nahafahanay nifantina ireo mpitarika nahazo fanomezan-dàlana sy fanekena. ….
Anatin'izany tontolo izany no mifoha indray ireo fifandirana fahiny niotrika ela tao, toy ny any Avaratr'i Mali izay misy olona an'arivony voatery mandositra ny fonenany mba hialokaloka any amin'ireo firenena mpifanolo-bodirindrina.
Ny tranonkala temoust.org, Survie touarègue, mampiditra filazàna iray momba ny vokatry ny fifandirana izay navoakny dia mampahafantatra fa:
Raha kely indrindra dia 30.000 ireo olona nafindra monina tao Mali ary miaina anaty fepetra tena faran'izay ratsy, noho ny ady ifanandrinan'ny tafika Maliana sy ireo vondrona mitam-piadiana ao avaratr'io firenena io nanomboka tamin'ny tapaky ny Janoary. Ny CICR dia mitondra fanampiana ho an'olona an'arivony amin'izy ireo, sy koa 15.000 hafa nafindra any Niger mpifanolo-bodirindrina aminy. Afaka nitsidika ihany koa an'ireo voatàna izy no sady nitsabo an'ireo naratra tao Mali.